कसरी बित्दैछ मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओको दशैं विदा ?| Corporate Nepal
असोज २८, २०७८ बिहिबार ०६:४८
काठमाडौं । यस पटक दशैंका विदामा बाहिरफेर घुम्न जान्न । घरमै बसेको छु । दशैं काठमाडौंमा नै मनाउछु । दशैंको बेला घरमा बस्दा मेरो समय चाहीं विशेषगरी पठनपाठनमै बित्नेको छ । यो समय भनेको लामो विदा हुने भएकोले आफन्त र साथीभाईसँगको भेटघाटको गर्ने, आफन्तजन र परिवारलाई दिने समय पनि हो । अरु बेला फुर्सद नहुने र भेटघाट गर्न जान पनि नभ्याइने हुन्छ । यो बेला भनेको सबैको फुर्सद हुने समय भएकोले साथीभाई भेटघाट र आफन्तजनलाई दिने समय दिइरहेको छ । तर, मलाई भने अध्ययनमा रुची हुँदा घरमा बस्ने र त्यसैमा समय बित्दैछ ।
दशैंका विदामा बिहानको समय ध्यान तथा शारीरिक कसरतमा नै बित्ने गर्छ । बाँकी अधिकांश समय भने अध्ययनमा उपयोग हुन्छ । घर बस्दा अरु काम नहुने, बाहिर डुल्न पनि मन नलाग्ने र अध्ययनमा रुची हुने भएकोले बैंकिङ व्यवस्थापन, जीवनी तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्दै छु । यस पटकको दशैंमा पनि मैले भारतीय लेखकको बैंकिङ सम्बन्धि पुस्तक पढेको छु । बैंकिङ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पुस्तकमा मलाई विशेष रुची छ । अभिजित बनर्जीको गुड इकोनोमिक फर हार्ड टाइम्स पनि मलाई पढ्न रुची लाग्ने पुस्तक हो । यो पुस्तक पनि यस पटक हेर्दैछु ।
विदाको समयमा अध्ययन गर्दा समय बितेको पत्तो हुँदैन् भने आफ्नो रुचीको विषय पनि पूरा हुन्छ । छुट्टिको समयमा मलाई बाहिर निस्कनभन्दा पनि घरै बस्नु मन लाग्छ । विदाको समयमा घुम्नु राम्रो भए पनि अहिलेको महामारीको समय छ । यो बेला बाहिरफेर घुम्नुभन्दा घरमै बस्नु र ज्ञानगुणका कुरा सिक्नु राम्रो हो । त्यसैले म यो दशैंको विदामा बाहिरफेर निस्कन मन लागेन । अन्य समय त घुमघाम भइरहेको हुन्छ । कार्यालयको कामले दौडधूप भइरहेको हुन्छ ।
अध्ययनका अतिरिक्त मलाइ लेख्न पनि रुची लाग्छ । बेलाबेलामा अर्थतन्त्रका विषयमा लेख्न रुचाउँछु । लेख्ने रुची म अर्थतन्त्रकै विषयमा लेख लेखर पूरा गर्ने गरेको छु । लेख लेख्ने भन्ने विषय सोचेर यो विषयमा लेख्छु भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ । कहिलेकाहीँ कुनै विषयवस्तु आउँदा मनमा लाग्यो भने त्यसैलाई लेख्ने पनि गरेको छु ।
(पोखरेलसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित, उनी मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष हुन्)
ब्याज बढाउँदासमेत बैंकको व्यापार स्थिर, अन्तरबैंक सापटी पनि ठप्प
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा घट्यो, पहिलो त्रैमासमा २ करोड ९६ लाखमात्रै कमायो
चौध वाणिज्य बैंकको ब्याजदर एउटै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको (कुनको कति ?)
बैंकहरूले ब्याजदर १० प्रतिशत भित्रै कायम गर्ने, बिहीबार नयाँ ब्याजदर आउने
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप भन्दा कर्जा २६ अर्बले बढी, कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?
सात वाणिज्य बैंकमा निक्षेपकै ब्याजदर दोहोरो अंक नाघ्यो, कुनको कति ?